Uthotho lwe-Elvis, i-Twitterrific, ipesenti yaseMelika kunye neemveliso zeApple nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Uthotho lwe-Elvis, i-Twitterrific, ipesenti yaseMelika kunye neemveliso zeApple nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Kule veki sibone iindaba ezininzi ezinomdla kwilizwe le-Mac nakwi-Apple ngokubanzi, kodwa singatsho ukuba khange ibe yeyona veki ibalulekileyo yenkampani. Onke amehlo ajolise ngqo ekufikeni kwe-iPhone X kwaye kukuba hype iyanda ngale ndlela.
Ngaphandle kwesi sizathu, kufuneka sishiye bucala yonke enye ingcaciso esiza nayo ivela eCupertino, kodwa ngokucacileyo baphulukana nodumo. Ngaphandle koku, siza kubona uthotho lweendaba esicinga ukuba zinomdla kwaye sinokuthi yenye yezona zinto zibalaseleyo ndivela eMac.
Enye yeendaba ezibalaseleyo kukuba U-Apple urhoxisile i-Elvis Presley miniseries yehlazo leNkampani yeWeinstein. Usomashishini uHarvey Weinstein wayexeliwe amashumi eminyaka yokuxhatshazwa ngokwesondo kunye neenkwenkwezi zaseHollywood. Iindaba zazihlasela ngamandla kwaye oku kuyenzile UApple uza kuphinda acinge ngezivumelwano zakhe neNkampani yeWeinstein.
Ezi ndaba zilandelayo zinxulumene nesicelo sokulawula iiakhawunti zethu ze-Twitter, I-Twitterrific. Kule meko, emva kokulinda ixesha elide, abasebenzisi baya kuba nakho ukonwabele usetyenziso lweMac.
Kwelinye icala, kufuneka siqaqambise isiqwenga seendaba ezithi Ama-64% abantu baseMelika banemveliso ye-Apple. I-Apple okwangoku iyonwabele banzi kwaye yomelele isiseko somsebenzisi kwihlabathi liphelaKodwa eUnited States isiseko siphezulu kakhulu.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sishiya iindaba malunga nokusweleka kwenkxaso engaphezulu kokubhengezwa IMicrosoft Office 2011 kwiMac. Ngale ndlela, kufuneka sikwenze kucace ukuba yinto esele sithethile ngayo ngaphambili kwaye iqinisekisiwe le veki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uthotho lwe-Elvis, i-Twitterrific, ipesenti yaseMelika kunye neemveliso zeApple nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UWoz U, iqonga le-Intanethi lokufunda itekhnoloji kuSteve Wozniak
I-NVIDIA GeForce ngoku sele ifumaneka kwi-beta yeMac, kodwa ingekabikho eSpain